Naphezu kweqiniso lokuthi izazi bagcizelele ukuthi inhlanganisela inyama namazambane ikhuthaza iqoqo Kilos extra, abaningi bayaqhubeka bedla bajabule ukuba izitsha ezifanayo. Cishe kuzo zonke izizwe ungathola zokupheka inyama nengulube amazambane. Izidlo kubo mubi ngenxa sibalo, Nokho, akukanciphi okumnandi. Okokuqala, kungcono pancake, zrazy futhi, yebo, abathakathi. Kuyinto yokugcina ikakhulukazi uthanda ukupheka eBelarus, eNtshonalanga ye-Ukraine nasePoland. Kulokhu, isizwe ngasinye has okufana yayo ezithakazelisayo yokulungiselela.
Kuyinto kule nabathakathi ezweni amazambane nge nengulube cabanga ke isidlo sabo kazwelonke. Mhlawumbe ngoba Belarus kuyinto umkhiqizi elikhulu amazambane. Noma mhlawumbe nje ngenxa yokuthi besifazane bendawo Uyi esihlwabusayo ikakhulukazi bese eyama amazambane pancake ezazigxishwe inyama. Empeleni, ngokusho indlela sokulungiselela kanye nohlobo zabathakathi Belarusian ayefana kakhulu.
Ukuze inyama ukugxusha udinga ukuthatha:
- 400 amagremu ingulube fat;
- 2 anyanisi aphakathi;
- usawoti, pepper kanye nezinye izinongo ukunambitha.
- 12 izingcezu amazambane;
- 1-2 wezipuni kafulawa (amancane, ethambile ngeke nabathakathi);
- 2 anyanisi ezinkulu;
- 1 isipuni ukhilimu omuncu;
- amagremu 100 ubhekeni;
- pepper, usawoti,
- amafutha zemifino for ukuthosa.
Indlela ukupheka inyama nge nabathakathi e-Belarusian?
ukulungiselela yabo iqala nge ukugcwaliswa inyama. Yeqa nengulube. Anyanisi sibe yimichilo kanye gazinga emafutheni zemifino uze segolide. Engeza kanye usawoti kanye pepper (uma uthanda ungakwazi abeke nezinye izinongo) inyama phansi uhlanganise kahle.
Manje singakwazi ukuqhubekela mass amazambane. Nezilimo eziyizigaxa bahlanza kahle futhi bahlanza. Khona-ke grate. Kungcono hhayi ubuvila futhi sikwenze ngesandla, njengoba processor noma crumple amazambane Slicer, futhi umi phandle juice kakhulu. Ukucindezela mass okuholela akudingekile. Engeza yashizi onion, amaqanda, ukhilimu omuncu, ufulawa, pepper kanye nosawoti. Kuyaphawuleka ukuthi ngenxa nenqwaba ukhilimu omuncu amazambane ahlale emhlophe. Futhi, ungahlukumezi ufulawa. Zincane kangaka, imnandi uyogcina nabathakathi. Zonke mix.
Preheat epanini ukuthosa ngamafutha zemifino. Beka isipuni amazambane mass ke kancane ukugxusha avale ukugxusha omunye isipuni amazambane yashizi. Fry nabathakathi nge inyama nengulube nhlangothi zombili kuze yegolide umbala shift isici ebhodweni enezindonga obukhulu. Beka kuhhavini imizuzu 15-20 at 180 degrees upheke kuze ngomumo. Phakathi naleso sikhathi, ubhekeni onion fake Chop izinti. Kuzoba umhluzi kubathakathi. Fry in kahle ukufuthelana uyithose pan ubhekeni lokuqala kuze ivelele juice. Bese wengeza i-anyanisi kanye gazinga kuze kuba sobala. Khonza wavutha nabathakathi zazharki futhi ukhilimu omuncu.
Kodwa eNtshonalanga ye-Ukraine nabathakathi ukulungiselela iresiphi ezahlukene ngokuphelele lapho kungekho amazambane. Ngaphandle, aba maningi efana ikhekhe futhi pancake mncane isipinashi, babhekane nezinga elikhulu inyama ukugxusha kanye mushroom sauce. Kulokhu, nabathakathi yaseTranscarpathia nge nengulube kungekho okumnandi kancane futhi flavorful. Ngaphezu kwalokho, ngenhloso yokubalungiselela, awudingi isikhathi esiningi nomzamo omkhulu.
Ukulungisa pancake isipinashi udinga ukuthatha:
- 3 amaqanda inkukhu;
- isipuni ushukela;
- 250 amagremu kafulawa kakolweni;
- 50 amagremu of isipinashi (zingafundwa futhi eqandisiwe);
- 300 ml ubisi;
- isipuni namafutha;
- amanzi abilayo isipinashi.
adingekayo ukugcwaliswa inyama:
- 600 amagremu yengulube mafutha;
- 3 wezipuni cream esindayo;
- uwoyela Vegetable ukuthosa;
- pepper kanye nosawoti ukunambitha.
Ekuphetheni, kudingeka namanje ukupheka amakhowe sauce amagremu 100 chanterelles noma ezinye amakhowe, 1.5 izinkomishi ukhilimu esindayo, pepper kanye nosawoti. Kuzo zonke lezi imikhiqizo ungenza enjalo okumnandi nabathakathi, iresiphi ngesithombe sigcwalisa iyiphi magazini Culinary.
Okokuqala udinga ukubhaka pancake oluhlaza. Futhi isinyathelo sokuqala ukuba nithele kubo isipinashi. Kuze kube manje uhlelo amanzi ababezowabilisa, ukwehlisa imizuzu 2, ushise. Dlulisela ku endishini, engeza 1 inkomishi umhluzi usike blender. Shiya epholisa. Phakathi naleso sikhathi, ishaye amaqanda ngosawoti kanye noshukela, uthele ingxenye ingilazi yobisi bese wengeza ufulawa. Hlanganisa kahle bese wengeza ubisi ezisele, ngenkathi siqhuba ukuyaluza. Kubalulekile ukuthi mass akazange yakha izigaxa. Bese wengeza puree isipinashi namafutha omnqumo uhlanganise. Preheat epanini ukuthosa Fry pancake.
Okulandelayo udinga ukwenza ukugxusha. Kuyinto, ngenhlanhla futhi ukuhluka lowo wafaka amazambane abathakathi. Ingulube uthathe yizicucu aphakathi nendawo kanye gazinga emafutheni zemifino kuze inyama brown ukukhanya. Bese wengeza onion lisikiwe ku chetvertkoltsa, gazinga kuze kuphekwe konke. Thela usawoti kanye pepper. I kwaphumela zazharku inyama egayiwe, uthele ukhilimu kanye isiyaluyalu.
It uhlala kuphela ukulungiselela sauce. amakhowe Wild (izimpungushe, omhlophe noma ezinye) zifakwe emanzini abilayo imizuzu 15-20 kuze kuthambe. Khona-ke Fry eside kuze eliphekwe uwoyela zemifino. Ekupheleni, engeza ucezu ibhotela ukhilimu, pepper kanye nosawoti. Letha sauce ukuze ngamathumba futhi vula ukushisa off. Leresiphi kungcono kakhulu ukuba ayiyeke le amakhowe, ngoba ungenayo evelele mushroom zizwakale ezinjalo. Manje singakwazi ukuqhubeka nenhlangano zabathakathi.
On ipuleti ukubeka Pancake ke lo ukugxusha kancane bese mushroom sauce (ketshezi kuphela, ngaphandle amakhowe ngokwabo). Ngakho-ke izingqimba enye uze uphelelwa ukudla, ngaphezu amakhowe, yebo. Lesi sakamuva kumele kube isipinashi Pancake. Phakathi 'ikhekhe "zibe yizicucu eziyisishiyagalombili futhi uthele usoso esele nge amakhowe. Hlobisa nge zasemazweni, kumele uze etafuleni namanje nabathakathi ashisayo yaseTranscarpathia. Recipe nge isithombe isidlo cishe ucelwe ukuthi zonke izivakashi. Phela, esikhanya ngakho, elimnandi futhi esihlwabusayo.
Warlocks ku Baltic
Ngo esifundeni aseBaltic, eyakhelene Belarus Yiqiniso, uzilungiselele nabathakathi amazambane nge inyama e iresiphi yayo. Isikhathi esining impela, uwayehlalise wendawo abakholelwa ngisho nokuthi enguqulweni yawo ukupheka kuphela yeqiniso. Zithanda noma zingathandi - kanzima ukusho. Nokho, abapristi abenza imilingo Baltic engengaphansi mnandi. Basuke izimpawu flavour obucayi ngenxa yokuthi ukuthi amazambane is wagcoba on a grater emihle, futhi abathakathi ngomumo iyisitshulu a sauce alube. Okungenani ngenxa yalesi sizathu, ungazama inguqulo yasendaweni.
Yini okudingeka ukupheka abathakathi nge kadokotela kusukela Baltic uthi?
Ukuze amazambane mass edingekayo:
- 2.5 kg of amazambane eluhlaza;
- ufulawa inkomishi;
- emhlabathini pepper;
Ukuze ukugcwaliswa inyama:
- 600 amagremu of inyama nengulube,
- izinongo ukunambitha.
Futhi kusadingeka 300 ml ukhilimu, imifino uwoyela kanye breadcrumbs. Eqinisweni, kungadingeki lutho olunye ukuba inhlanganisela zakudala "amazambane nge inyama" Kwatholakala okumnandi.
Okokuqala udinga ukuba uwuhlikihle wonke amazambane on a grater emihle. Uma uthi nhlá, kuyoba kakhulu, kodwa isidingo kangaka. Okuhle ngawakhamela bonke juice ngokusebenzisa cheesecloth. Ungqimba kufanele uthole eyomile kakhulu, kakhulu elingenalo ketshezi. Kodwa-ke akudingekile ukuba uthele, kuyasiza ukulungiselela sauce. Bese wengeza ingxube amazambane ku iqanda, izinongo usawoti. Govuza. Kancane kancane engeza ufulawa kuze inhlama okunamathelayo futhi ngeke ubambe ukuma.
Manje ungenza ukugcwaliswa. Ukuze wakhe umnsalo blender Chop noma grate. Engeza yokungalungiseleli nge izinongo usawoti. Hlanganisa kahle. Ungathatha noma iyiphi inyama - hhayi nje ingulube noma yenkomo, kodwa futhi inkukhu. Kunoma yikuphi, kuzoba warlocks kusuka amazambane nge inyama nengulube. It uhlala kuphela kuwaphuphuthekise.
Thatha kancane obukhulu amazambane mass, ukwakha ikhekhe bese efakwa maphakathi ukugxusha inyama. Sculpt emaphethelweni, efana ophaya. roll Ezinhle breadcrumbs gazinga nhlangothi zombili baze segolide. Lokhu kufanele kwenziwe kakhulu ukufuthelana uyithose pan ne amafutha zemifino. Songa epanini ezijulile phezu nomunye. Alulaze ukhilimu ngaphambilini ishiywe amazambane juice futhi banezela izinongo ukunambitha. Yelula nabathakathi amazambane nge inyama nengulube phezu emlilweni ophansi imizuzu 15-20. Khonza nge sauce, ufafaze amakhambi oqoshiwe.
Mhlawumbe, ezizweni eziningi zikhona izindlela ezisebenzisa amazambane nge inyama nengulube. Nokho, kwaba le nabathakathi ezidumile. Ngempela, bakwazi ukufaka kanye ashisayo nabandayo. Babukeka enhle etafuleni iholide, ngisho kuze kube sekupheleni lomkhosi lapho iningi appetizers kanye salads ulahlekelwa ukubonakala yabo ikhanga. Nabathakathi elula ukuthatha nawe endleleni noma emsebenzini. Futhi okubaluleke - ba kulula ukupheka, futhi yonke imikhiqizo ezidingekayo uyohlale ekhaya.